Ny Oppo A72 5G no finday vaovao natomboka tamin'ny SoC Dimensity 720 | Androidsis
Ny Oppo A72 dia finday iray izay efa eny an-tsena nandritra ny fotoana kelikely, hatramin'ny nanombohany tamin'ny volana Jona. Ity dia tonga toy ny terminal midadasika izay manana sandam-bola be, saingy miaraka amin'ny processeur tsy misy 5G sy ny masontsivana izay nanome toerana ho an'ny fanatsarana. Noho io antony io dia namoaka kinova vaovao momba azy ny orinasa ankehitriny, izay tonga toy ny Oppo A72 5G.
Ity fitaovana ity dia tsy mampiditra chipset tsara kokoa fotsiny, fa mampiasa efijery mandroso kokoa izay afaka miasa amin'ny tahan'ny famelomana bebe kokoa noho ny variant tsy misy 5G.
1 Inona no atolotry ny Oppo A72 5G vaovao?
Inona no atolotry ny Oppo A72 5G vaovao?
Ny Oppo A72 dia finday iray izay miaraka amin'ny fanovana kosmetika sasany, raha oharina amin'ny A72 tany am-boalohany. Eo anoloana dia tsy hafa izy io, fa rehefa miresaka momba ny tontonana aoriana isika, indrindra noho ny modely fakantsary arosony, izay manomboka amin'ny quadruple ka hatramin'ny triple ary voalamina ao anaty amin'ny fomba hafa, araka ny hita. amin'ny sary finday.
Raha ny fanontaniana, ity fitaovana vaovao ity dia manana fakan-tsarimihetsika lehibe 48 MP, fakan-tsary zoro 8 MP sy zoro fahatelo 2 MP izay mifantoka amin'ny fanomezana tifitra misy effet mode potret. Ny fakan-tsary voalohany dia mbola ao anaty lavaka ao amin'ny efijery ary 16 MP.
Mikasika izany, ny efijery dia ny teknolojia IPS LCD miaraka amina vahaolana FullHD + 2.340 x 1.080 teboka ary diagonaly 6.5 santimetatra. Ny tahan'ny fanavaozana azony ampiasaina dia tsy 60Hz; fa kosa, ho amin'ny tsaratsara kokoa dia 90 Hz, izay mahatonga ny lalao sy ny traikefan'ny mpampiasa ho malama kokoa noho ny Oppo A72 tany am-boalohany, izay mandeha amin'ny 60 Hz.
Oppo A72 5G, sanda finday ho an'ny vola miaraka amin'ny efijery 90 Hz
Ny processeur izay voafidy ho an'ny A72 5G dia ny Dimensity 720 miaraka amin'ny fifandraisana 5G, iray amin'ireo vahaolana farany Mediatek izay valo-core ary mirehareha amin'ny haben'ny node 7nm. Ity SoC ity, ankoatry ny fampifangaroana azy amin'ny Mali-G75 GPU, dia manasongadina ny fanaingoana manaraka ny cores: 4x Cortex-A76 amin'ny 2.0 GHz + 4x Cortex-A55 amin'ny 2.0 GHz. Fanatsarana izany, miorina amin'ny Snapdragon 665 hitantsika amin'ny maodeliny tsy misy 5G, izay tsy mampiseho fampisehoana mitovy satria ity processeur ity dia ambany kokoa ny asany.
Izy io dia atolotra amin'ny kinova RAM sy habaka fitehirizana anatiny, izay 8 GB sy 128 GB avy. Ilay fitaovana kosa dia manana fitaovana bateria mahazaka 5.000 mAh izay azo alefa amin'ny seranan-tsambo USB-C ary mifanaraka amin'ny haitao haingam-pandeha 18W haingana.
Ny fanasongadinana hafa an'ny Oppo A72 5G dia misy ny ColorOS 7.2 miorina amin'ny Android 10, fanamafisam-peo Dirac 2.0, mpamaky fantsom-baravarankely ary kapila finday 3.5mm.
SCREEN 6.5-inch FullHD + IPS LCD miaraka amin'ny piksel 2.340 x 1.080
CAMERA REAR 48 MP Main + 8 MP Wide Angle + 2 MP Bokeh
BATERA 5.000 mAh misy fiampangana haingana 18-watt
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 ambanin'ny ColorOS 7.2
ASA hafa Mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny lafiny / Famantaran-tarehy / USB-C / Dirac 2.0
Amin'izao fotoana izao ny Oppo A72 5G dia navotsotra tany Sina ihany, noho izany dia azo atao ny mividy azy io any ihany na amin'ny alàlan'ny fomba fanafarana avy any amin'ny firenena hafa. Ny vidiny ofisialy dia 1.899 yuan, izay mitovy amin'ny eo amin'ny 230 euro na 270 dolara amin'ny fanovana eo ho eo. Mbola fantatra ihany hoe rahoviana izy io no hamidy amin'ny faritra hafa, ary koa raha hiampita sisintany sinoa tokoa izy io.
Azo alefa mialoha amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny orinasa izy io, ary hanomboka amin'ny 31 Jolay ny varotra. Izy io dia misy safidy loko telo: mainty, fotsy fotsy / mavokely ary manga / mena mena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oppo dia mandefa ny A72 5G vaovao miaraka amin'ny processeur tsara kokoa ary ny efijery 90 Hz
Ahoana ny fanesorana na fanovana ny mari-drano amin'ny sary amin'ny telefaona Xiaomi